"Foolish idiots try to negotiate about human right with terrorists.Negotiated them is what they want from government. Smart nation and government is never negotiate with terrorists.If these terrorist want islamic land and freedom.They need to try in their origin.Where islamic terrorism finds support in the muslim world.These arealot of Islam nation on this world.No way to negotiate with illegal migrate terrorists."
2017 Terrorist Attacks !
Suu Kyi says Rakhine isabig problem!
Talk to Al Jazeera - Aung San Suu Kyi: 'There is n...
Hindu Survivors Describe Slaughter, Forced Convers...
The Rohingya Crisis (25-8-2017)
2017 Terrorist Attacks 971 attacks, 5,561 fataliti...
မေလသံစဉ်ရဲ့'Save Myanmar' သီချင်း
သြဂုတ်လ ၂ ၂၀၁၅ခုနှစ် မိုးလေ၀သအခြေနေ
ဒီကနေ့မနက် မိုးလေဝသဂြိုလ်တုမှ ဖမ်းယူရရှိတဲ့ပုံအရ ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာ တိမ်အသင့်အတင့်မှ တိမ်ထူထပ်နေပါတယ်. ...
မွနျမာသတငျးအခကျြအလကျစီမံခနျ့ခှဲမှုဌာန or Myanmar Information Management Unit! (MIMU)
MIMU Myanmar Information Management Unit Search form Search မွနျမာနိုငျငံအကွောငျး အကဉျြးခြုပ...
Myanmar Information Management Unit (MIMU) က အလုပ်အကိုင်ခေါ်နေပါတယ်!
နိုင်ငံသားများအတွက် အလုပ်ခေါ်စာများ ဤစာမျက်နှာသည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ လူသားချင်းစာနာ ထောက်ထားမှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်...
Myanmar - Job Vacancies in United Nations and ...
လစာကောငျးကောငျးရသော နိုငျငံခွားသားတှနှေငျ့ အလုပျလုပျခွငျနကေတြဲ့ အမိမွကေ ရှလေေးတှအေတှကျ ဤစာမကျြနှာသညျ မွနျမာနိုငျငံရှိ United Nations Deve...
အိန်ဒိယ ပဲအဝယျလြော့ခြ ကနျ့သတျမှုကွောငျ့ ပွညျတှငျး ပဲစြေးကဆြငျးလာပွီး ပဲကုနျသညျတှငျ တနျခြိနျ သိနျးဂဏနျးပိုကျမိနကွေောငျး!
အိန်ဒိယ ပဲအဝယျကနျ့သတျမှုကွောငျ့ ပဲစငျးငုံစြေး တဝကျလောကျထိပွုတျကလြာ! လကျရှိတှငျ ပွညျတှငျး ကုနျစညျဒိုငျကွီးမြားဖွဈသညျ့ ရနျကုနျ ဘုရ...
ရေဘေး ကယ်ဆယ်ရေး အတွက် (MIMU) မြန်မာ သတင်း အချက်အလက် စီမံ ခန့်ခွဲမှုဌာန ဆိုဘာလဲ?
Management Unit (MIMU) မွနျမာသတငျးအခကျြအလကျစီမံခနျ့ခှဲမှုဌာန ဆိုဘာမှနျးမသိဖွဈနသေူတှအေတှကျပါ..... ရဘေေးအလှူ တှအေတှကျ မရှိမဖွဈတဲ့ အလှ...
တွဲဖက်၍ မစားသင့်သော အစားအစာများ ~The Food that should't eat together
တွဲဖက်၍ မစားသင့်သော အစားအစာများ Food Combining by Than Han on Scribd တှဲဖကျစားသောကျခွငျး၊ သုံးစှဲခွငျး မပွုသငျ့သော အရာမြား။ အရ...
Myanmar 2015 UNHCR country operations profile - Myanmar | Overview | Working environment Fresh displacement was witnessed in...
Why it is important to protect the rights of indigenous people! Indigenous people are the native people inaterritory. They have histori...
သရက်မြို့ရေဘေးသင့် ရေပေါ်ကျွန်းကျေးရွာမှ ပြည်သူများအား ကူညီဆောင်ရွက်
သရက်မြို့ရေဘေးသင့် ရေပေါ်ကျွန်းကျေးရွာမှ ပြည်သူများအား ကူညီဆောင်ရွက် သရက် ဇူလိုင် ၃၁ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး သရက်ခရိုင် သရက်မြို့နယ်ေ...
Tweeter In Chief #Rohingya Fake News on AJNews Grid ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောဖြစ်စဉ်များနှင့် ပတ်သက်၍ လုပ်ကြံဖန်တီးထားသည့် သတင်းအမှားများ ပြန့်နှံ့လျက်ရှိ၍ သတိရှိကြရန် လိုအပ်ကြောင်း အယ်ဂျာဇီးယား ရုပ်သံမှ ထုတ်လွှင့်ခဲ့
Tweeter In Chief #Rohingya Fake News on AJNews Grid
ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောဖြစ်စဉ်များနှင့် ပတ်သက်၍ လုပ်ကြံဖန်တီးထားသည့် သတင်းအမှားများ ပြန့်နှံ့လျက်ရှိ၍ သတိရှိကြရန် လိုအပ်ကြောင်း အယ်ဂျာဇီးယား ရုပ်သံမှ ထုတ်လွှင့်ခဲ့
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်တောဒေသဖြစ်စဉ်များနှင့် ပတ်သက်၍ လုပ်ကြံဖန်တီးထားသည့် မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံအမှားများဖြင့် သတင်းများ ထုတ်လွှင့်လျက် ရှိသဖြင့် သတိရှိကြရန် လိုအပ်ကြောင်း အယ်ဂျာဇီးယား ရုပ်သံက ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။
အယ်ဂျာဇီးယားရုပ်မြင်သံကြားသတင်းဌာန၏ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ထုတ်လွှင့်သည့် Tweeter In Chief #Rohingya Fake News on AJNews Grid အစီအစဉ်တွင် အစီအစဉ် တင်ဆက်သူ Leah Harding က ထိုသို့ ထုတ်လွှင့်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
အစီအစဉ် တင်ဆက်သူ Leah Harding က ဓါတ်ပုံဖြင့် ဖော်ပြထားသော ၄င်းဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရပ်မှာ လူမှုကွန်ယက်တွင် လူအများ စိတ်ဝင်စားမှု ရရှိနေကြောင်း၊ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ထိုသို့ လူအများစိတ်ဝင်စားမှုသည် သတင်းမှား အတော်များများ ကို ပြန့်နှံ့စေနိုင်သည်ကို သတိထားရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ မိမိတို့ AJ News Grid အစီအစဉ်သို့ အလွန်တရာပင် စိတ်ရှုပ်ဖွယ်ရာ ကောင်းသည့် ဓာတ်ပုံ အတော်များများ ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး မိမိတို့ အစီအစဉ်အဖွဲ့သားများအနေဖြင့် ယင်းဓါတ်ပုံများ၏ မူလဇစ်မြစ်ကို အတည်ပြုနိုင်ရန် ကြိုးစား ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြကြောင်း၊ မိမိ တင်ပြခဲ့သည့် အတိုင်း လွန်ခဲ့သော ၅ နှစ်ခန့်က နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဓာတ်ပုံများကို ရခိုင်ပြည်နယ်က လူမဆန်သောလုပ်ရပ်များအဖြစ် စွပ်စွဲပြောဆိုမှုများ ဖြစ်နေကြောင်း၊ ထိုသို့ သတင်းမှားများ အများအပြား မြင်တွေ့နေရသည့်အတွက် ရခိုင်ပြည်နယ်မှ သတင်းများ ဟု လူသိများစေရန် Hastag တွဲမည် ဆိုပါက အထူး သတိထားရန် လိုအပ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
၄င်းနောက် နေ့လည်ကပင် အစီအစဉ် ထုတ်လုပ်သူအား တွေ့ဆုံပြီး ဤကဲ့သို့ လုပ်ကြံဖန်တီးထားသော မှားယွင်းသည့် ဓာတ်ပုံအချို့ ရှိနေကြောင်း တင်ပြခဲ့ကြောင်း၊ အစီအစဉ် ထုတ်လုပ်သူက ထိုသို့ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ပတ်သက်သော သတင်းများကို ပေးပို့နေသူ တစ်ဦး ရှိကြောင်း၊ ၎င်းမှာ သူ့ကိုယ်သူ လူမျိုးတစ်မျိုး (မြန်မာနိုင်ငံတွင် တရားမဝင်သော လူမျိုးအမည်) ဟု ပြောကြောင်း၊ ၄င်း၏ အမည်မှာ Ro Nay San Lwin ရိုနေဆန်းလွင်ဟု ခေါ်ကြောင်း၊ ယင်းမတိုင်မီ Human Rights Watch အဖွဲ့က အဆောက်အဦများ မီးလောင်ထားသော ဂြိုလ်တုဓါတ်ပုံများ ထုတ်ပြန်ပြီးနောက် ဤ (မဟုတ်မမှန်) ဓါတ်ပုံများကို တင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
အယ်ဂျာဇီးယားရုပ်မြင်သံကြားသတင်းဌာန၏ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် Tweeter In Chief #Rohingya Fake News on AJNews Grid အစီအစဉ်တွင် အစီအစဉ် တင်ဆက်သူ Leah Harding ၏ ပြောကြားချက်ကို Leah Harding ယူကျု စာမျက်နှာတွင် ကြည့်ရှု နိုင်သည်။ ယင်းသတင်း ကြည့်ရှုရန် အင်တာနက်လိပ်စာမှာ https://www.youtube.com/watch… ဖြစ်သည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းမှားများ ဖြန့်ချိလျက်ရှိသော Ro Nay San Lwin သည် ကာကွယ်ဆေး အဓမ္မ ထိုးနှံရာမှ ကလေးငယ်တစ်ဦး သေဆုံးရသည် ဟူ၍ မဟုတ်မမှန် လုပ်ကြံဖန်တီးထားသော သတင်းကို စတင်ဖြန့်ချိခဲ့သူလည်း ဖြစ်သည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်တောဒေသတွင် အောက်တိုဘာလ ၉ ရက်နေ့တွင် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအား အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက် မဟုတ်မမှန် လုပ်ကြံ ဖန်တီးထားသည့် သတင်းမှားကို ဖြန့်ချိလျက် ရှိရာ ထိုသတင်းမှားများကြောင့် နိုင်ငံတကာမှ မြန်မာ နိုင်ငံအပေါ် အထင်အမြင်လွဲမှားမှုများ ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။
ထိုသို့ သတင်းမှားများကို ဦးဆောင်ဖြန့်ချိနေသူများမှာ မြန်မာနိုင်ငံ ပြင်ပတွင် နေထိုင် နေကြသူများ ဖြစ်ပြီး လူမျိုးအမည်တစ်ခုကို အကြောင်းပြု၍ အကျိုးဆောင်သူများ အဖြစ် အလှူရှင်နိုင်ငံများ၊ အလှူရှင်အဖွဲ့ အစည်းများ၊ အလှူရှင် လူပုဂ္ဂိုလ်များထံမှ ငွေကြေးနှင့် ထောက်ပံ့ကူညီမှုများစွာ ရရှိလျက် ရှိကြောင်း၊ ပြည်ပရောက်ရှိနေကြသူများ ဖြစ်၍ ထောက်ပံ့ကူညီမှုများ အသုံးပြုကာ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ပဋိပက္ခများ ဖြစ်ပေါ်လာစေရန်၊ ပဋိပက္ခများ ငြိမ်သက်သွားပါကလည်း ပြန်လည် ဖြစ်ပွားလာစေရန် သွေးထိုးပေးနေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
Posted by Let's Save Myanmar at 03:56 Links to this post
Labels: Politics, Rakhine(Arakan)
Amnesty report confirms massacre of Hindus by Rohingya terrorists in Myanmar
FINALLY, TRUE STORIES CAME OUT!
WHY SO LATE 10 M0NTH?
"TRURH WILL UTIMATELY PREVAIL WHERE THERE IS PAINS TO BRING IT TO LIGHT"
Part ofalist given to Amnesty International by Hindu community leaders, giving details of 100 Hindus killed in two massacres in the Kha Maung Seik cluster of villages in Myanmar's northern Rakhine State on 25 August 2017. © Private
 See Agence France-Presse, “Hindus recount massacre as mass graves unearthed,” 28 September 2017; Reuters, “Slaughtered Hindusatestament to brutality of Myanmar's conflict,” 27 September 2017.
 Reuters, “Rohingya say their village is lost to Myanmar's spiraling conflict,”7September 2017. See also Mahadi Al Hasnat, “Who really attacked the Rohingya Hindus in Rakhine?” Dhaka Tribune, 1 October 2017, https://www.dhakatribune.com/bangladesh/2017/10/01/who-really-attacked-the-rohingya-hindus-in-rakhine/ (discussing the change in testimony to Reuters and other media outlets).
 Amnesty International interviews, Bangladesh refugee camps, 14 and 28 September 2017. See also Agence France-Presse, “Hindus recount massacre as mass graves unearthed,” 28 September 2017 (describing men in black, but not specifying who the attackers were); Mahadi Al Hasnat, “Who really attacked the Rohingya Hindus in Rakhine?” Dhaka Tribune, 1 October 2017 (discussing the evolution in stories, with descriptions of men in black but different versions of who those men were); Suliman Niloy, “Hindu refugees blame 'Rohingya militants' for attacking them in Myanmar,” bdnews24.com, 24 September 2017, https://bdnews24.com/bangladesh/2017/09/24/hindu-refugees-blame-rohingya-militants-for-attacking-them-in-myanmar (describing attackers in black who spoke the Rohingya dialect); Moe Myint, “Hindu Refugee Shares Eyewitness Account of Maungdaw Violence,” The Irrawaddy, 26 September 2017, https://www.irrawaddy.com/news/burma/hindu-refugee-shares-eyewitness-account-maungdaw-violence.html (identifying the attackers as Muslims).
Posted by Let's Save Myanmar at 22:40 Links to this post
Labels: Local News, Politics, Rakhine(Arakan), Religion
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ARSA အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ရဲ့ လူအစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်ဖြရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ARSA အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ရဲ့ လူအစုလိုက်အပြုံလိုက် ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ARSA အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ရဲ့ လူအစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်မှု အစီရင်ခံစာ AI ထုတ်ပြန်သတ်ဖြတ်မှု အစီရင်ခံစာ AI ထုတ်ပြန်တ်မှု အစီရင်ခံစာ AI ထုတ်ပြန်
Posted by Let's Save Myanmar at 22:33 Links to this post
Labels: Local News, Politics, Religion
Myanmar Weather Information!
Local War (4)
Weather News (18)
Tweeter In Chief #Rohingya Fake News on AJNews Gr...
Amnesty report confirms massacre of Hindus by Rohi...
Shivani Romance With Sharukh Khan,
Beautiful Asian Belly Dancers
Who wanna taste Big Big one?
World Ranking Web of Myanmar University?
ကိုယျပိုငျစြေး လိုငျစငျ လြှောကျထားခွငျး အတှကျ လိုအ...
5 facts about the Muslim population in Europe!
China has 56 ethnic groups.
See how to plywood withaplywood in China!
Myanmar Economic Monitor Oct, 2017
ဒီနေ့ တောငျသူတှကွေုံနရေတဲ့ အခွအေနေ?
အလုပျသမားတှေ ဆကျတိုကျဆန်ဒ ပွနမေယျဆိုရငျ လုပျငနျးတှ...
Selena Gomez - The Heart Wants What It Wants !
In Jerusalem, an embassy opens. In Gaza, at least ...
ရိုဟငျဂြာအရေး အနောကျအုပျစုတှေ ဘာကွောငျ့ ဝငျရောကျ ...
မွနျမာပွညျကအခှနျ တှကျနညျးတဲ့ ခုမှသိတယျ, အာ့ကွောငျ့...
My Blog's Tours!
Did You Known!
Look Attentively Movies!
Myanmar Earthquake Committee!
Today's Earthquake in Myanmar!
Save Myanmar Flood
SUPPORT MYANMAR FLOOD VICTIMS!
HELP MYANMAR MEDIA!
Help Myanmar Music & Video
SUPPORT BY MYANAMR FLOOD VICITIMS!
Let's Save Myanmar Now
When'd it happen!